Gaas oo Cadeeyay aragtida Puntland ee arimaha Doorashooyinka – Radio Daljir
Diseembar 9, 2015 1:35 b 0
Somalia, December 09, 2015-(Daljir)_Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabiweli Maxamed Cali Gaas ayaa magaalada Muqdisho kaga qayb galay shir looga hadlayey nooca ay noqon doonto doorashooyinka dalka soomaaliya ka dhici doona sannadka 2016-ka.
Shirka ayaa waxaa iyaguna kasoo qayb qalay Madaxweynaha Dawladda Federaalka Soomaliya, Ra’iisul-wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya,Madaxda maamul goboleedyada, wasiiro iyo xildhibaano ka kala socda Dawladda Federaalka iyo Dawlaha xubnaha ka ah, Wakiilo ka kala socda beesha caalamka oo ay ka mid yihiin Danjire Maraykanku usoo diray soomaaliya, Wakiilka Xog-hayaha Guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya, Madaxa Midowga Yurub ee Soomaaliya, Midowga Africa, IGAD iyo Wakiilo kale oo tiro badan.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabiweli Maxamed Cali Gaas oo madasha shirka ka jeediyey khudbad taariikhi ah ayaa sheegay Puntland inay ka jirto nabad buuxda oo laysku hallayn karo inkastoo kooxda al-shabaab ay weli ku dhuumaalaysanayaan firxadkoodii buuraleyda Gal-gala ee Gobolka Bari oo noqotay “Toora-booradii” Soomaliya.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabiweli Maxamed Cali Gaas ayaa mar uu ka hadlayey nooca doorasho ee ugu haboon dalka inay tahay in laga gudbo hannaankii awood qaysiga beelaha ee 4.5 loogana gudbo habab kale oo diin ahaan caddaalad ahaanba ugu wanaagsan dalka.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hoosta ka xariiqay inaysan suurta gal ahayn inay dalka ka dhacdo wax muddo kororsi ah isla mar ahaantaana ay lagama maarmaan tahay in ladhiso Aqalka Sare ee Dalka.
Madaxweyne Gaas ayaa sidoo kale ku cel-celiyey muhiimadda ay leedahay in ladhiso ciidan qaran oo isku dhaf ah oo wata summadda qarank si looga badbaado falalka liddiga ku ah nabadda iyo dawladnimo xooggan oo ka dhalata Soomaaliya.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabiweli Maxamed Cali Gaas ayaa beesha caalamka iyo soomaalidaba u sheegay sida ay lagama maarmaanka u tahay in loo sinnaado deeqaha dalka ee lagu soo qaado magaca Soomaaliya iyo in si siman loo qaybsado khayraadka dalka.
Sidoo kale madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa xusay in loo baahan yahay dastuurka Dalka in dib loo eego isla markaasin ay Dawladda Puntland Fidisay go-gosha shirkaasi dastuurka dib loogu eegayo maadaama dastuurku uu weli qabyo yahay loona baahan yahay in ladhammaystiro wax-badan oo khaldana lays waafajiyo.
Geba-gebadii Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabiweli Maxamed Cali Gaas ayaa adkeeyey in la sameeyo Khariidad Siyaasadeed (Road Map) taas oo looga gudbayo doorashada 2016-ka isla markaasina xaqiijinaysa inaanay dhici karin wax muddo kororsi ah oo loo suubiyo labada gole ee Dawladda.
Wasaaradda Arimaha Dibadda Somalia oo Gawaari loogu Deeqay